Qorshaha Masar iyo xiriirka cusub ay la yeelaneyso Somaliland | KEYDMEDIA ONLINE
Qorshaha Masar iyo xiriirka cusub ay la yeelaneyso Somaliland
Masar ayaa la rumeysanyahay in u jeedka ugu weyn ay Somaliland xiriir ula sameyneyso uu yahay in ay saldhig Milateri ka furato.
MUQDISHO, Soomaaliya – Maamulka Somaliland ayaa qorsheynaya in uu xiriir cusub la sameysto dowladda Masar, sida uu Warsidaha Daily News Egypt uu sheegay Wasiir ku xigeenka Arrimaha Dibadda Somaliland Liibaan Yuusuf Cismaan.
Wasiir ku xigeenka ayaa sheegay in Somaliland ay dooneyso in ay xiriir iskaashi, mid Dhaqaale iyo mid Ganacsi la yeelato Masar, isagoona hoosta ka xariiqay in dhawaan magaalada Hargeysa ay soo gaareen wafdi heer sare oo ka socoda Masar.
Wasiirka ayaa sidoo kale sheegay in Masar ay khibrad u leedahay barista arrimaha Macdanta oo ka mid ah kheyraadka dabiiciga ah ee laga helo dhulka Soomaalida, isagoona xusay in Somaliland ay khibradaas ka faa’iideysaneyso, fursadna u aragto.
Mar wax laga weydiiyay arinta ku saabsan xiriirka cusub ee Somaliland iyo Masar in uu dhaawici karo kan ay la leeyihiin Itoobiya ayuu sheegay in aysan wax saameyn ah ku yeelan doonin, isla markaana ay doonayaan in ay dhex dhexaadiyaan labada dhinac.
Dowladda Masar ayaa tix-gelineysa in ay saldhig military ka sameysato Somaliland, taas oo ay u aragto istiraajiyadda siyaasadeed ay ku yeelan karto Geeska Afrika oo ay ku loolamayaan dalal badan oo reer galbeedka ah.
Arintaan ayaa imaaneysaa Sannad kadib, markii ay soo shaac baxeen wararka sheegaya in Ruushka uu raadinayo in uu Saldhig ka sameysto Geeska Afrika, gaar ahaan Soomaaliya.
Si kastaba maamulka Somaliland oo ah maamul aan aqoonsi caalami ah ka heysan dunida ayaa dhumuc u noqonaya halka ay saldhiyo ka sameynayaan dalalka ku loollamaya awood ku yeelayasha istiraajiyadda Geeska Afrika.
0 Comments Topics: somaliland
Aqoonsiga Somaliland oo Ceel ku dhacay
Warar 19 January 2022 0:13
Ganacsiga Suuqa Ceerigaabo oo hoos u dhacay
Warar 18 December 2021 14:54
Shil khasaare gaystay oo ka dhacay Somaliland
Warar 18 December 2021 7:04